မည်သည့်အရာမျှ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိကြောင်း သက်သေပြရန် ထူးခြားသောမော်ဒယ်6ယောက်ဖြင့် ကြော်ငြာတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည် လူကြိုက်များသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု - ONE DAILY MEDIA
မည်သည့်အရာမျှ ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိကြောင်း သက်သေပြရန် ထူးခြားသောမော်ဒယ်6ယောက်ဖြင့် ကြော်ငြာတစ်ခုဖန်တီးခဲ့သည် လူကြိုက်များသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု
နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးအဝတ်အစားအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Missguided သည် #KeepOnBeingYou နှင့် #InYourOwnSkin hashtags များကိုအသုံးပြု၍ ခန္ဓာကိုယ်၏ အပြုသဘောဆောင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို စီစဉ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဤပရောဂျက်တွင် သာမန်စံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့် ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိသော မော်ဒယ်6ဦး ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ အင်္ဂါရပ်များက အောင်မြင်မှုရရှိရန် ကူညီပေးပုံကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ။
ဤပုံမှန်မဟုတ်သော မော်ဒယ်လ်များကို ကြည့်ရှုပြီး အလှတရားဟာ မတူညီသောရှုထောင့်များစွာမှ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ထွက်ပေါ်လာကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ Isabella၊ Mariana၊ Polly၊ Joanne၊ Maya တို့ဟာ သူတို့၏အသွင်အပြင်ကို မရှက်ကြောက်သော ခမ်းနားထည်ဝါသည့် မိန်းကလေးများဖြစ်ပါတယ်။
(1) Polly Ellens
ဒီဆံပင်နီရဲမှုအလှကို အရင်က မြင်ဖူးကြမှာပါ။ Polly ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အတော်ကြာက မော်ဒယ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ကျော်ကြားမှုကလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးလာပါတယ်။ သူ့မိသားစုထဲက အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ယုံကြည်မှုရှိပြီး ဒီအရည်အသွေးက သူမကို အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ သူမက ပြောပါတယ်။
A post shared by Polly Ellens (@pollyellens)
Polly သည် ငယ်ရွယ်စဉ်အခါက မတူညီသော မျက်နှာထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြု၍ တင်းတိပ်များကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း တစ်စုံတစ်ရာ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် သူမ၏ ထူးခြားသောအသွင်အပြင်ကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သဘောထားက တင်းတိပ်တွေကို ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်တစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့ပြီး မိန်းကလေးအချို့က သူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာ တက်တူးထိုးဖို့တောင် စတင်စိတ်ကူးခဲ့ကြပါတယ်။
(2) Mariana Mendes
A post shared by Mariana Mendes (@marianamendes.m)
ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ အသက် 24 နှစ်အရွယ် မော်ဒယ်နှင့် ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာဟာ သူ့ကိုယ်သူ အမှန်တကယ် နှစ်သက်လက်ခံသူဖြစ်ပါတယ် ။ Mariana ဟာ သူမရဲ့ မျက်နှာမှာ မွေးရာပါ အမှတ်အသားနဲ့ မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး မိခင်ဖြစ်သူက ဆရာဝန်ထံ အကူအညီတောင်းကာ ၎င်းကို ဖယ်ရှားရန် ကြိုးစားမှုများ အားလုံးမအောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း ကံကောင်းထောက်မစွာ Mariana အတွက် ပြသနာမရှိခဲ့ပါဘူး။
Mariana သည် သူမအား ထူးဆန်းပြီး ရုပ်ဆိုးသည်ဟုပင် ခေါ်ဝေါ်ကြသည့် လူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း သူမသည် သူမ၏ မွေးရာပါ အမှတ်အသားကို ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံထားပြီး သူတို့၏ ထင်မြင်ချက်ကို ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။
(3) Isabella Fernandes
Isabella သည် အသက် 17 နှစ်အရွယ်တွင် မီးလောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရသော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မီးလောင်မှုကြောင့် သူမဟာ ဒဏ်ရာအနာတရတွေ ရခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီ့အတွက် သူမရှက်မကြောက်ခဲ့ပါဘူး။ မတူညီတဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချက်တွေက သူမကို ယုံကြည်မှုရှိလာအောင် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။
A post shared by Isabella Fernandes (@fauxnandes)
အစပိုင်းမှာတော့ သူမဟာ အတော်လေးကို ရှက်နေပေမယ့် ဒီဖြစ်စဉ်က သူမအပေါ် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပြီဆိုတာ သူမ သိလိုက်ရပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ သူမဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူနေပါတယ်။
(4) Maya Spencer-Berkeley
A post shared by Maya Spencer-Berkeley (@mbajsb)
အသက် 20 နှစ်အရွယ် Maya သည် Epidermolysis Bullosa ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ၎င်းသည် ရှားရှားပါးပါး မျိုးရိုးဗီဇ အရေပြား အခြေအနေ အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အရေပြားကို အနည်းငယ် ထိရုံဖြင့် နီမြန်းကာ စုတ်ပြဲစေပါတယ်။ Maya အတွက် ဤကမ်ပိန်းဟာ ဤရောဂါရှိသူများကို ၎င်းတို့တစ်ဦးတည်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ချို့ယွင်းချက်များရှိနေသော်လည်း မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ချစ်မြတ်နိုးကာ လေးစားမှုရှိရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိနေကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။
(5) Beth Brice
ဒါက Beth အတွက် မော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံပါပဲ။ ဤမိန်းကလေးဟာ ပရောဂျက်တွင် ပါဝင်ရန် အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ Beth သည် သူမ၏အသားအရည်ကို အမြဲဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစား နေသူဖြစ်တာကြောင့် ဤကမ်းလှမ်းချက်ကအံ့သြစရာကောင်းသည်ဟုထင်ကာ လက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဤ campaign က Beth ကို ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိစေပါတယ်။
(6) Joanne Dion
A post shared by JOANNÈ DION (@joannedion_)
အသက် 21 နှစ်အရွယ် Joanne သည် စာရင်းကိုင်ပညာကို လေ့လာသည့်အပြင် plus-size modeling လုပ်နေသည့် albino တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Joanne သည် အလှတရားသည် သင့်အသွင်အပြင်နှင့် သင့်စိတ်အတွင်း၌သာ ရှိသောအရာဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ပါတယ်။ အလှအပဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင် လက်ခံရမှာဖြစ်ပြီး သင်လိုချင်တဲ့ပုံစံက သင့်အလှအပပါပဲ။
Missguided ၏ ကမ်ပိန်းတွင် အပြုသဘောဆောင်သော ထောက်ခံမှုများစွာရရှိထားပြီး ဖက်ရှင်သည် အကန့်အသတ်မရှိကြောင်း သက်သေပြရန် ၎င်းတို့၏ပုံများကို Instagram တွင် မျှဝေကာ သန်းပေါင်းများစွာသော မိန်းကလေးများကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ဥပမာအချို့ဖြစ်ပါတယ်။
(😎 Tess Daly
Tess သည် ကြွက်သားများ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းကို ခံစားနေရသော်လည်း ၎င်းသည် သူမ၏ဘဝတွင်အောင်မြင်ရန် မဟန့်တားနိုင်ပေ။ သူမသည် လှပသောလက်တစ်စုံဖြင့် မိတ်ကပ်လိမ်းထားသော အလှပြင်ဘလော့ဂါတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ လူအချို့က မနှစ်သက်ဖွယ်မှတ်ချက်များ ရေးကြသည်ဟု Tess မှ ပြောကြားခဲ့ သော်လည်း အချို့သူများက သူမအတွက် Role model အဖြစ်နေပေးရခြင်းကို ကျေးဇူးတင်ကြကြောင်း Tess မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
(9) Enam Asiama
A post shared by Rebecca Zoubek (@rebecca.zoubek)
Enam သည် Ghana မှဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် သူမသည် plus-size မော်ဒယ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကာ Great Britain တွင်နေထိုင်ပါတယ်။ သူမကို ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ ဘယ်သူမှမပြောရဲ လောက်ပါဘူး။
(10) Rebecca Zoubek
Rebecca သည် သူမကိုယ်သူမ အမြဲတမ်း ဖုံးကွယ်ကာ ရှားပါးသော အရေပြားရောဂါဖြစ်သည့် anetoderma ဖြင့် နေထိုင်နေရပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး ယခု ရေဗက္ကာသည် သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တည်မှုကို ဂုဏ်ယူချစ်မြတ်နိုးနေပါပြီ။
(11) Zoe Warlow
“ဘယ်သူ့ကို ဂရုစိုက်ရမှာလဲ ? ဖက်ရှင်ဆိုတာ မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန် ပိန်ပြီး ချော့မော့နေဖို့ မလိုပါဘူး။ တစ်ခါတလေ ရယ်စရာကောင်းပြီး တကယ်ကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစွာနေနိုင်ပါတယ်”
(12) Jenna Ward
“ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါ့ ရဲ့ cellulite နဲ့ ပင်ပန်းနေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ဒီပုံကို ပြုပြင်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒါက တကယ့်အစစ် ငါပါပဲ”
မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို လက်ရှိပုံစံအတိုင်းလက်ခံနိုင်ပါသလား ?? သင့်ထင်မြင်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေခဲ့ပါ။
ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ဖန်တီးထားသည့် သမိုင်းဝင်ရုပ်ပုံများ
နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်များရဲ့ Miniကိုယ်ပွားသားသမီးများ
အမွေးထူတဲ့ အစ်ကိုကြီးနှင့် သူရဲ့လူသားညီမတို့ရဲ့ ချိုမြိန်တဲ့နှောင်ကြိုး
Jan 10, 2022 One Daily Media